Maxaad recycle bin for android?
Dadka isticmaala android bulshada waxaa sii kordhaysa iyo bulshada hubaal tirtirtaa xogta aan ogayn in loo baahan yahay kici karo mustaqbalka. Si aad u xaqiijiso in sida ugu fiican oo gobolka functionalities tahay waxaa gundhig nidaamka waxaa jira tobanaan kun oo codsiyada in la hubiyo in files in la tirtiray waxa lagu soo celiyay si loo hubiyo in user ka helo functionalities ugu fiican raagin wax aan sameeyo . Tutorial ayaa la sameeyey si loo hubiyo in sida ugu fiican ee ay barnaamijyadooda ugu wanaagsan waxaa soo bandhigay in user iyo user sidoo kale helo gobolka adeegyada tahay marka ay timaado dib u soo celinta xogta ayaa sidoo kale ula kac ahayn waa la tirtiray ama ay sabab u tahay nidaamka ama aadanaha baadi. Codsiyada in halkan lagu sharxay sidoo kale hubin doona in user ka helo Casharrada ugu fiican gundhig sidoo in la hubiyo in geedi socodka noqon fudud ka dhigi lahaa
Haddii uu jiro khasaaro xog ku saabsan android ah ay sabab u sabab kale oo aan ahayn telefoonka ah waxyeelo ka dibna qorshe A tani ayaa loo sameeyey si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada farshaxanka. The Chine in ay tahay in la isticmaalo waa sida soo socota:
Waa mid ka mid ah codsiyada ugu fiican in la soo saaro arrintan la xiriira in la hubiyo in loo baahan yahay user ee taageerto ilaa xogta la tir gebi ahaanba. The dalwaddii iyo bay'ada daruur in ay bixiyeen codsigan waa kuwa ugu fiican oo ay u hubiso in macluumaadka waxaa si joogto ah kor u taageeray in la hubiyo in user helo adeegyada ugu fiican ee arrintan la xiriira sameeyo. Codsiga ayaa kasoo muuqday on Play Store iyo rating guud sidoo kale waa xiddig taas oo muujinaysa in dadka isticmaala ee ma aha oo kaliya jecel codsigan laakiin sidoo kale uu helo ugu fiican oo gobolka ka shaqeynayaan tahay dib u soo kabashada iyadoo aan wax lacag xitaa haba yaratee hal. Waxaa sidoo kale in la xuso in codsiga waa kan ugu fiican ay sabab u tahay arrin ah in waxa loo isticmaali karaa offline sidoo taas oo macnaheedu yahay in si loo hubiyo in dib u soo kabashada ugu wanaagsan ee la sameeyo user uusan lahayn si aad u hubiso in internet-ka ayaa loo baahan yahay .
2. Recycle Bin u Android
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka codsiga tahay in la soo saaro si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee files iyo sawirada in ay muhiim yihiin ee dabiiciga ah waxaa lagu soo kabsaday oo aan wax arrin oo kharash dheeraad ah. Bin ayaa recycle u android sidoo kale waa lacag la'aan iyo in la hubiyo in user helo adeegyada ugu fiican ee la xitaa codsiga lacag la'aan ah taas oo uu soo si joogta ah si loo hubiyo in user helo ugu fiican ee hababka soo kabashada iyo adeegyada ay la socdaan interface ka-dhexgal in uu yahay qaybta ugu wanaagsan oo dhan. Rating ee codsiga waa weyn oo loo isticmaali karo in saameyn go'aan dajinta.
Faa'iidooyinka Plan A
Qaybta ugu fiican waa in user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in codsiga lacag la'aan ah waxaa lagala soo bixi iyo riyaaqay oo aan arin kasta. Isticmaalka ma u leeyihiin in ay ku qaataan wax ka si loo hubiyo in dib u soo kabashada ayaa la sameeyey.
Qasaaraha Plan A
Faa'iida ugu weyn ee qorshuhu yahay in codsiyada dhammayn meel iyo sabab la mid ah waxa ay sidoo kale waxaa caqabad ku yihiin hanaanka in ka socda marka ay timaado nidaamka android. Ayaa khasaaro ugu musiibo labaad oo waa in user ma ka heli karaa 100% damaanad ah in xogta la soo celiyo oo aan wax arrintan oo dhibaato doonaa. Haddii uu jiro ma lahan in arrintan la xiriira ka dibna ku rakibidda codsiga lacag la'aan ah xaqiiqdii waa aan macquul ahayn, sida ay tahay aan isticmaalo oo dhan oo kaliya waqti lumis iyo meel bannaan oo arrintan la xiriira in hubiyaan in user waxba wanaagsan waxaa ka dhumaya rakiban in ayaa la sameeyey.
Waa qorshe ugu fiican in la dhaqan galinayo in arrintan la xiriira iyo waxa ay sidoo kale hubisaa in user helo 100% natiijada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Wondershare Dr. Fone u Android (Android Data Recovery) waa xalka ugu wanaagsan oo uu soo talinayaa in arrintan la xiriira si loo hubiyo in wax kaqabashada la sameeyo 100% damaanad qaaday. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira, waa in sidoo kale la hubiyo in sida ugu fiican ee la qabtay si loo telefoonka sidii codsigan waa computer la xiriira oo sidaas daraaddeed buu u helo natiijada ugu wanaagsan u user ugu dhaqsiyaha badan aan. Iyadoo qasabno oo kaliya dhowr user waa ay awoodaan in ay dib u soo ceshano dhamaan xogta ah ee telefoonka android oo ay ku jiraan qoraallada, xiriirada, emails iyo walax kale oo user a ka fikiri karaa. Noocyada file taageeray barnaamijka ayaa lagu xusay sida hoos. Waxaa sidoo kale in la xuso in liis dhamaystiran oo lagu daydo taageeray waxaa laga daawan karaa http://www.wondershare.com/data-recovery/android-data-recovery-reference.html si fiican loo fahmo.
JPG, TIFF (TIF), PNG, BMP, GIF, PSD, CRW, CR2, NEF, saxda, RAF, SR2, MRW, DCR, WMF, DNG, ERF, cayriin, AI, XCF, billabo, X3F, ARW
AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, wmv, ASF, FLV, Jabbuuti, Mpg (MPEG), dhexena (RMVB), MKV, MXF
AIF (AIFF), M4A, MP3, regelingen, WMA, bartamihii (MIDI), OGG, AAC
DOC / DOCX, XLS / XLSX, PPT (PPT / PPTX), PDF, CWK, HTML (HTM), INDD, EPS, BOGGAGA, KEY, LAMBARADA, VSD, ODT, ODP, duduwan yihiin, ODG, ODF, RTF PLIST,, CANSHUURTA, mat
Sida loo isticmaalo Wondershare Dr. Fone u Android?
Tallaabooyinka in lagu hoos ku xusan yihiin in la raaco si loo hubiyo in xogta la soo kabsaday android:
1. Laga soo bilaabo URL http://www.wondershare.com/data-recovery/android-data-recovery-guide.html user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in barnaamijka la soo bixi oo ku rakiban. User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in telefoonka mobile ka dibna ku xiran nidaamka si ay barnaamijka waxaa lagu ogaadaa,
2. debugging USB ayaa markaas waa in la dardargeliyo:
3. Barnaamijku wuxuu markaas u falanqeeyaan doonaa taleefanka si fiican:
4. hab The scan iyo nooca file ka dibna waa in la soo xulay:
5. Marka dib u soo kabashada ayaa la sameeyey user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in faylasha sida rabitaan gooba iyo inta kale ee la tuuraa,
Faa'iidooyinka Plan B
Ka dib waa dhibcood in ay tahay in la tixgeliyo in arrintan la xiriira:
Qorshaha waxa uu yahay 100% jirta
Ayaa damaanad la xidhiidha soo kabashada xogta waa 100%
Waa hufan oo wax ku ool ah.
Qasaaraha Plan B
Faa'iida kaliya ee qorshahan waa in aysan lacag la'aan ah iyo user wuxuu u baahan yahay in la bixiyo lacag gaar ah si aad u hesho barnaamijka.
1. Waa maxay nooca telefoonada aad isticmaalayso?
2. Weligaa ma tirtiray wax muhiim ah ee aad taleefan?
3. Sida wadiiqo u ah khasaaro xogta ku saabsan telefoonka, kaas oo ka tilaabo aad jeceshahay?
> Resource > Android > Android Recycle Bin - Sida loo soo celiyo files tirtiray on Android